Ọdịdị nke ụwa: ihe niile ịchọrọ ịma | Netwọk Mgbasa Ozi
Anyị bi na mbara igwe dị mgbagwoju anya ma zuru oke nke nwere ọtụtụ akụkụ na-eme ka ọ dịrị na nguzozi ma kwe ka ndụ dịrị. Ọdịdị nke ụwa E kere ya ụzọ abụọ. Nke mbụ, a na-enyocha ime ụwa anyị. Ọ dị mkpa ịmata ihe dị n'ime ụwa iji ghọta ọtụtụ akụkụ ndị ọzọ. Emechaa, ọ dịkwa mkpa iji nyochaa akụkụ niile dị na mpụga n'usoro, n'ozuzu ha, ịmara ụwa ebe anyị bi.
Na nke a, anyị ga-enyocha ma mara n'ụzọ miri emi usoro dum nke ụwa. You chọrọ ịmatakwu banyere ya?
1 Ọdịdị dị n'ime ụwa
2 Mpụga nke ụwa
2.3 Ihe omimi
3 Nhazi nke ụwa ọ na-agbanwe agbanwe ma ọ bụ dịgasị iche iche?
Ọdịdị dị n'ime ụwa
Presentswa na-enye usoro ihe owuwu by concentric n'ígwé ebe ihe nile meputara ya no na uzo ozo. Eziokwu ahụ bụ na ekewapụrụ ha site na oyi akwa anyị nwere ike ịmata ekele maka mmegharị nke ebili mmiri ala ọma jijiji mgbe ala ọma jijiji mere. Ọ bụrụ na anyị enyochaa mbara ala site n'ime na mpụga, anyị nwere ike ịdebe usoro ndị a.
Isi dị n'ime ime ala nke ụwa ebe a hụrụ ọtụtụ ígwè na nickel. A na-agbaze ya nke ọma na ọ bụ ụwa kpatara ikuku ndọta. A na-akpọkwa ya endosphere.
A na-agbaze ihe ndị ahụ n'ihi okpomọkụ dị elu nke achọtara isi ya. Fọdụ n'ime usoro ụwa na-egosipụta n'elu. Anyị nwere ike ịhụ ala ọma jijiji, ugwu mgbawa ma ọ bụ mwepụ nke kọntinenti (plate tectonics).
Uwe elu ụwa dị n'elu isi ma mejupụta ọtụtụ silicates. Ọ bụ akwa oyi akwa karịa n'ime ụwa ma pere mpe ka ọ na-erute elu ala. A na-akpọ ya mesosphere.
N'akụkụ obosara a na-ewere ọnọdụ ọtụtụ ihe onwunwe convection phenomena. Mmeghari a na - eme ka kọntinenta megharia. Ihe ndị na-ekpo ọkụ nke na-esite na isi na-ebili ma mgbe ha dị jụụ, ha na-alaghachi n'ime. Mmiri iyi ndị a na-ahụ maka uwe na-ahụ maka ngagharị nke mbadamba tectonic.
Ọ bụ oyi akwa dị n’ime ime ụwa. A na-akpọkwa ya ebelata. A na-agụnye ya site na silicates, carbonates na oxides. O tokarịrị na mpaghara ebe kọntinent dị ma dịrịkarịsịrị ala ebe oke osimiri dị. Ya mere, e kewara ya na nke oke osimiri na kọntinent. Okpokoro ọ bụla nwere njupụta nke ya ma mejupụtara ya ụfọdụ ihe.
Ọ bụ mpaghara na-arụ ọrụ na mpaghara ebe a na-egosipụta ọtụtụ n'ime usoro dị n'ime. Nke a bụ n'ihi okpomọkụ dị n'ime ụwa. Enwekwara usoro mpụga dị ka mbuze, njem na sedimenti. Usoro ndị a bụ n'ihi ike anyanwụ na ike ndọda.
Mpụga nke ụwa
Akụkụ elu nke ụwa mekwara ọtụtụ ọkwa nke jikọtara ihe niile dị n'ụwa.
Ọ bụ ntọala mmiri niile dị na eriri ụwa. Nwere ike ịchọta oke osimiri na oke osimiri, ọdọ mmiri na osimiri, mmiri mmiri na glaciers. Mmiri dị na hydrosphere na-aga n'ihu na mgbanwe. Ọ naghị anọ otu ebe akpọrọ. Nke a bụ n'ihi mmiri ozuzo.
Naanị oké osimiri na oké osimiri bi n'akụkụ atọ n'ụzọ anọ nke ụwa dum, ya mere, ịdị mkpa ha na mbara ụwa dị ukwuu. Ọ bụ ekele hydrosphere na ụwa nwere njirimara acha anụnụ anụnụ.
A na-ahụ nnukwu mmiri agbaze na mmiri ma na-edo onwe ya n'okpuru oke ike. Ike ndị na-eme ha metụtara njikọgharị nke ,wa, mma ọnwa na ikuku. N'ihi ha, mmegharị nke ọtụtụ mmiri dịka oke osimiri, ebili mmiri na ebili mmiri na-apụta. Mmeghari a nwere mmetuta di ukwuu n’ogo uwa, ebe o na emetuta ndi di ndu. Ihu oke mmiri na-emetụtakwa ihu igwe nwere mmetụta dịka El Niño ma ọ bụ La Niña.
Banyere mmiri dị ọhụrụ ma ọ bụ nke kọntinent, anyị nwere ike ịsị na ha dị ezigbo mkpa maka ịrụ ọrụ nke ụwa. Nke a bụ n'ihi na ha bụ ndị na - eme ka ikuku sie ike n'ụwa.
Ikuku Ọ bụ oyi akwa gas nke gbara ụwa dum gburugburu ma ha dị mkpa maka ndụ tobe. Oxygen bụ ikuku na-eme ka ndụ dị ka anyị si mara ya. Tụkwasị na nke a, ọtụtụ gas na-enyere aka nyochaa radieshon nke anyanwụ nke nwere ike igbu ndị dị ndụ na ihe ndị dị ndụ.
A na-ekewa ihu igwe n'otu ụzọ dị iche iche, nke ọ bụla nwere ogologo dị iche, ọrụ na ngwakọta.
Malite site na Ulo elu, bụ nke dị kpọmkwem na ntọala siri ike nke ụwa. Ọ dị ezigbo mkpa n’ihi na ọ bụ ebe anyị bi na ọ bụ ya na-akpata ihe gbasara mbara igwe dịka mmiri ozuzo.
Osimiri ọ bụ ọzọ oyi akwa na gbatịrị n'elu banyere 10 km nke troposphere. Na oyi akwa a bụ nchebe nke ụzarị ọkụ UV. Ọ bụ ozone oyi akwa.
Na mbara ala ọ na-esochi elu ma nwekwa ozone.
Ikuku akpọrọ ya otu a n'ihi na, n'ihi mmetụta nke radieshon nke igwe, okpomọkụ nwere ike ịfefere 1500 Celsius C. N'ime ya enwere mpaghara a na-akpọ ionosphere, nke ọtụtụ atọm na-efunahụ elektrọn ma dịrị n'ụdị ion, na-ewepụta ike nke mejupụtara ọkụ mgbago ugwu.
Ihe omuma ọ bụghị oyi akwa nke itselfwa n'onwe ya, ma obu nhazi nke ihe ndi ozo nile di. Ihe nile dị ndụ bi n’ime ụwa anyị mejupụtara biosphere. Ya mere, biosphere bụ akụkụ nke ụwa, kamakwa hydrosphere na ikuku.
Njirimara nke biosphere bụ ihe a na-akpọ ụdị dị iche iche. Ọ bụ banyere ụdị dị iche iche dị iche iche dị ndụ na ụdị ndụ dị na mbara ụwa. Na mgbakwunye, enwere mmekọrịta nhatanha n’etiti ihe niile gbasara biosphere bụ maka ihe niile iji rụọ ọrụ ọfụma.
Nhazi nke ụwa ọ na-agbanwe agbanwe ma ọ bụ dịgasị iche iche?
N'ihi usoro ọmụmụ dị iche iche, amarala na ime dị na mbara ụwa anyị dị iche iche. A haziri ya na mpaghara mpaghara nwere ihe dị iche iche. Usoro ọmụmụ ndị a bụ:
Direct ụzọ: Ha bụ ndị mejupụtara ka ha na-enyocha ihe ndị mejupụtara nkume ndị ahụ dị n’elu ụwa. Enwere ike imetụ nkume niile aka site na elu iji nwee ike ịmata njirimara ha niile. Ekele maka nke a, na ụlọ nyocha na-eme atụmatụ njirimara niile nke nkume ndị mejupụtara ụwa. Nsogbu bụ na ọmụmụ ihe a kpọmkwem ga-eme naanị ihe dị ka 15 kilomita miri emi.
Usoro efu: bụ ndị na-eje ozi maka nkọwa nke data iji chọpụta ihe dị n'ime ime ụwa. Ọ bụ ezie na anyị enweghị ike ịnweta ha ozugbo, anyị nwere ike ịmata ihe dị n'ime ya maka ọmụmụ na nyocha nke ụfọdụ njirimara dịka njupụta, ndọta, ike ndọda na ebili mmiri ala. Ọbụlagodi na nyocha nke meteorites, enwere ike wepụta ihe dị n'ime ụwa.
Otu n'ime ụzọ ndị ọzọ eji eme ihe dị n'ime ala bụ ebili mmiri. Ihe omumu banyere oso nke ebili mmiri na onodu ha emewo ka ayi mata ime nke uwa, ma nke anakpo ma aru aru. Ma nke ahụ bụ omume nke ebili mmiri ndị a na-agbanwe dabere na njirimara na ọdịdị nke nkume ha na-agabiga. Mgbe enwere mpaghara ngbanwe n'etiti ihe, a na-akpọ ya nkwụsị.
Site na ihe omuma a nile, oputara na ime elu uwa bu ihe di iche iche ma hazie ya na mpaghara ndi nwere ihe di iche iche.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere nhazi nke ụwa na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ọdịdị nke ụwa
Kedu ihe ọ bara dijo
peeji ahu dikwa nma
Zaghachi to qleimporta
Ọ dị ezigbo mma na peeji ahụ Amụtara m ọtụtụ ihe banyere isiokwu a
Zaghachi Marcelo Daniel Salcedo Guerra
Ezigbo mbipụta, zuru oke.
Zaghachi José Reyes